Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Mareykanka Afrika oo Duqayn Ka Fuliyay Soomaaliya.
Ciidamada Mareykanka Afrika oo Duqayn Ka Fuliyay Soomaaliya.
Posted by Dayr	/ October 28, 2018
War qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday nawaaxiga deegaanka Kuunyo Barrow Shabeelaha Hoose lagu dilay xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Alshabaab.
Weerarkan oo dhacay khamiistii aynu kasoo gudubnay taariikhduna ku beegnayd 25-bisha October ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu burburiyay gaadiid ay saarnaayeen xubno Alshabaab ka tirsan isla markaana lagu khaarijiyay guud ahaan xubnihii saarnaa sida lagu xusay warka qoraalka ah.
Inkastoo aan la shaacin magacyada ragga duqeynta lagu dilay ayaa hase ahaatee Warar soo baxaya ay sheegayaan in diyaarad Drones-ah bartilmaameedsaday gaari marayay agagaarka Kuunyo barow oo ah deegaan ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab.
Alshabaab ayaan ilaa iyo hada wax war ah kasoo bixin oo ku aadan sheegada Mareykanka ee ku aadan duqeyntan ay ku dileen xubno kamid ah dagaalamayaashooda.